Apple Inotenga Classical Music Kutenderera Service Primephonic | Ndinobva mac
Apple inotenga yechinyakare mimhanzi yekushambadzira sevhisi Primephonic
Kutenga kutsva kwakanangana nemasevhisi kunosvika kuApple vhiki rekupedzisira raNyamavhuvhu, mune iyi nyaya ndiyo yechinyakare mimhanzi yekushambadzira sevhisi Primephonic. Vazhinji venyu mune chokwadi chekuti munotoziva iyi yechinyakare sevhisi sevhisi, asi kune avo vasingazvizive, zvinofanirwa kutaurwa kuti sevhisi inopa yakasarudzika yekuteerera ruzivo nekutsvaga uye kufamba kwakakwidziridzwa kwerudzi urwu rwemimhanzi uye zvine musoro kurira kwemhando yepamusoro.
Iyo yakasarudzika mimhanzi yekushambadzira sevhisi Primephonic mumaoko eApple
Nekuwedzera kwePrimephonic, Vanyoreri veApple Music vanozobatsirwa nekuvandudza kukuru mukuteerera kumumhanzi wekare. Oliver Schusser pachake, mutevedzeri wemutungamiri weApple Apple neBeats, akataura panguva yekutenga sevhisi:
Isu tinoda uye tinoremekedza zvikuru mimhanzi yechinyakare, uye Primephonic ave anodikanwa wevadi vemimhanzi vanoda rudzi urwu. Tese pamwe chete, tiri kuunza maficha manyowani kuApple Music, iine yakasarudzika yemhando yepamusoro mimhanzi iri kuuya nekukurumidza izvo pasina mubvunzo zvichave zvakanakisa pasirese.
Kana ari wake, co-muvambi uye CEO wePrimephonic, Thomas Steffens, akataura kuti:
Kuunza zvakanakisa zvePrimephonic kune vanyoreri veApple Music kufambira mberi kukuru kwemimhanzi yechinyakare. Artists vanoda basa raPrimephonic uye zvatakakwanira indasitiri, uye ikozvino tinogona kubatana naApple kuunza chakanakisa chiitiko kumamirioni avanhu. Tine mukana wekuunza mimhanzi yechinyakare kuruzhinji rwevanhu uye kubatanidza chizvarwa chitsva chevaiti nezera idzva revateereri.
Primephonic haichawanikwe kune vatsva vatsva uye icharega kupa sevhisi kubva munaGunyana 7. Apple Music ine hurongwa hwekuvhura yakazvipira app gore rinouya iro richasanganisa iyo Primephonic mushandisi interface yemhando yechimhanzi inodiwa nevateveri pamwe nezvimwe maficha. Zvichakadaro, ikozvino vanyori vePrimephonic vanowana mwedzi mitanhatu yeApple Music mahara..
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Music » Apple inotenga yechinyakare mimhanzi yekushambadzira sevhisi Primephonic
Musha Pasati Rima Mwaka XNUMX Yemahara paApple TV +
Mamiriro ekumhanyisa Windows 11 paMac kuburikidza neBoot Camp, zvinoramba zvisina kujeka